वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम यस्तो छ - Everest Dainik - News from Nepal
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम यस्तो छ
भावी मेयर पनि चिन्नुहोस्: पूर्वसभासद र पूर्वमेयरदेखि विदेशमा पढेका युवासम्म
२०७४, ५ आश्विन बिहीबार
पर्सा, असोज ५ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ । प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनले एक मात्रै महानगर वीरगञ्जको छिनोफानो गरिरहेको छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा मत गणना जारी छ ।
गणकहरुले दलका प्रतिनीधिहरुलाई मतपत्र देखाएर सदर गराएपछि मात्रै मत गन्ने गरिएको छ । मतगणनास्थलमा हरेक दलबाट एक जना प्रतिनिधी बसेका छन् । सबै दलका प्रतिनिधीले हेरेपछि मात्रै मत गनिने भएकोले मत गणनामा ढिलाई भईरहेको छ । महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि ३५ जना र उपप्रमुख पदका लागि १० जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
परिणाम यस्ताे छ ।
राजनीति दल प्रमुख उपप्रमुख
राजपा राजेशमान सिंह २१४३ रम्भा मिश्र २००८
कांग्रेस अजय द्विवेदी १८०५ शान्ति कार्की १९७४
संघीय फोरम विजय सरावगी ९९५ पिङ्की यादव १०५०
माओवादी रहबर अन्सारी ७३९ दुर्गा क्षेत्री ७७४
एमाले बसरुद्धिन अन्सारी ६२५ सोफिया आचार्य ५९२
लोकतान्त्रिक फोरम विमल श्रीवास्तव ५३८ रिङ्कु देवि ५२९
देशको व्यापारिक राजधानी भएर मात्रै होइन, पछिल्लो मधेस आन्दोलनको बेला नाकाबन्दीको मुख्य केन्द्र बनेको र सबैभन्दा बढी क्षति भोगेको शहरमा अहिले ‘समृद्धि र विकास’ को नारा गुञ्जिएको छ ।
चार वर्षअघि संविधानसभा निर्वाचनमा सभासदका लागि प्रत्याशी बनेका चार जना नेताहरु अहिले मेयरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसले पनि वीरगञ्जको मेयर पदको महत्व र आकर्षणलाई अरु बढाएको छ ।वीरगञ्ज महानगरको मेयर पद कति आकर्षक छ भन्ने त मेयर बन्नकै लागि चर्चित व्यवसायीहरु यसबीचमा पार्टी प्रवेश गरेर टिकट लिन सफल भएको घटनाले नै स्पष्ट पार्छ । टिकट नपाउने नेताहरुले पार्टी नै छाडेर हिँडे । वीरगञ्जको मेयरको दौडमा रहेका खेलाडीहरु कोहीभन्दा कोही कम छैनन् ।
संयोगवस संविधानसभाको चुनावमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा दोस्रो र तेस्रो बनेका तथा क्षेत्र नम्बर २ मा दोस्रो र तेस्रो बनेकाहरु समेत अहिले मेयरमा पहिलो बन्न खोजिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकले वीरगञ्जको मेयरमा उठाएका उम्मेदवारहरु बीरगञ्जका जनताबीच परिचित अनुहार मात्रै होइनन्, उनीहरु हेबीवेट पनि हुन् । यसमा माओवादी केन्द्रले ३१ वर्षे युवालाई मेयरको दौडमा पठाएर खेललाई झनै रोचक बनाइदिएको छ ।
महानगरको मेयर बन्न जनताबीच गइरहेका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त ‘प्रोफाइल’ यस्तो छ-
अजय द्विवेदीः नेपाली कांग्रेस
विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय पूर्वसभासद अजय द्विवेदी वीरगञ्जबासीका लागि चिरपरिचित पात्र हुन् । ०४९ सालको पहिलो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाको उपमेयर भएदेखि नै उनी जनताबीच सक्रिय छन् ।
५५ वर्षीय द्विवेदी बौद्धिक एवं तार्किक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट सभासद जितेका द्विवेदी दोस्रो निर्वाचनमा भने एमालेका विचारी यादवबाट पराजित भएका थिए ।
वीरगञ्जको उपमेयर भइसकेका अजय महानगरपालिका मेयरको दौडमा हेबिवेट उम्मेदवार मानिन्छन् । हाल कांग्रेस पर्साका सभापतिसमेत रहेका द्विवेदी राजनीतिमा स्थापित खेलाडी हुन् । उनी पार्टीभित्र देउवा खेमाको भए पनि उनको उम्मेदवारीमा खासै विवाद देखिएको छैन ।
बसरुद्दिन अन्सारी: एमाले
एमालेका मेयर उम्मेदवार बसरुद्धिन अञ्सारी वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २३ प्रसौनी विर्ताका स्थानीय वासिन्दा हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए अध्ययन गरेका ५३ वर्षीय अन्सारी नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवं प्रवन्ध निर्देशक पनि हुन् । सरकारले हालै उनको मेडिकल कलेजको सम्बन्ध खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार बनेका अन्सारी ६ हजार मत पाएर तेस्रो भएका थिए । रोचक संयोग नै मान्नुपर्छ, पर्सा २ मा एमालेका बिचारी यादवले जित्दा दोस्रो र तेस्रो भएका प्रत्याशीहरु अहिले मेयरको दौडमा पनि सँगै छन् ।
फरक यति हो कि त्योबेला बसरुद्धिन माओवादीबाट उम्मेदवार थिए भने अहिले एमालेबाट ।
विमल श्रीवास्तवः फोरम लोकतान्त्रिक
फोरम लोकतान्त्रिकबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका विमल श्रीवास्तव वीरगञ्जका सबै पुस्ताका मानिसबीच परिचित पात्र हुन् । राजनीतिक उतार चढाव धेरै हेरेर खारिएका नेता हुन् उनी । वीरगञ्ज ५ का ६७ वर्षीय श्रीवास्तव पञ्चातकालदेखि बहुदलसम्म ४ पटक वीरगन्जको मेयर भइसकेका छन् । बिमल बिनाको चुनाव वीरगञ्जबासीले बिरलै देखेका छन् ।
राजपाका महासचिव समेत रहेका श्रीवास्तव पार्टीबाट टिकट नपाएपछि हठात लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरी मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
विजय सरावगी: संघीय समाजवादी फोरम
प्रसिद्ध व्यापारिक एवं व्यवसायिक घरानाका विजय सरावगी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका व्यक्ति हुन् । राजनीतिमा रुची राखे पनि संलग्न नभएका सरावगी ५ महिना अघि संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका थिए ।
५२ वर्षीय सरावगी सामाजिक र धार्मिक कार्यमा पनि संलग्न रहँदै आएका छन् । वीरगञ्जमा व्यवसायीहरु र मारवाडी समुदाय बढी भएकाले फोरमले सरावगीलाई अघि सारेको अनुमान गरिएको छ । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका परिचित व्यवसायी हुन् ।
राजेशमान सिंह: राजपा
राजेशमान सिंह वीरगञ्ज ३ का बासिन्दा हुन् । राजपाबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका ४५ वर्षीय सिंहको राजनीति कांग्रेसबाट शुरु भएको थियो ।
कांग्रेसपछि राजेशमान बिमल श्रीवास्तवसँगै राप्रपा, स्वतन्त्र समूह, तराई मधेस लोकतान्त्रिक हुँदै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा थिए ।
पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा रामसपाको तर्फबाट पर्सा नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका उनी तेस्रो भएका थिए । यो अर्को रोचक संयोग हो कि कांग्रेसका राजेन्द्र अमात्यले चुनाव जित्दा बिमल श्रीवास्तब दोस्रो र राजेशमान तेस्रो भएका थिए । अहिले उनीहरु सबैजना मेयरको दौडमा छन् ।
राजेशमान मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका थिए । पहाडी नेवार समुदायको भए पनि सिंह मधेसी आन्दोलनमा सुरुदेखि नै लागेका छन् । ठेक्काको कामसँगै अन्य व्यवसाय पनि गरेका सिंह युवा माझ लोकपि्रय छन् । वीरगञ्जको मेयरमा मधेसवादी पार्टीबाट पहाडे उम्मेदवार बनेका उनी एकमात्र पहाडे प्रत्याशी हुन् ।
रहबर अन्सारी: माओवादी केन्द्र
माओवादीले वीरगञ्जको मेयरमा अघि सारेका रहबर अन्सारी वीरगञ्जको राजनीतिमा भर्खरै ‘डेब्यू’ गरेका युवा नेता हुन् । युरोपमा पढेका ३१ वर्षीय अन्सारी गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक पनि हुन् ।
रहबर अन्सारी बीरगञ्जबासीका लागि नयाँ पात्र भएकै कारण उनले विशेष गरी युवा वर्गलाई आकर्षित गर्ने प्रचार शैली अपनाएका छन् । उनको ‘हाइटेक’ प्रचार शैलीको चर्चा वीरगञ्जमा भइरहेको छ । श्राेत: बिभिन्न अनलार्इन पाेटल ।